Sọftụwia na Ngwaọrụ m enweghị ike ibi na-enweghị | Martech Zone
Sọftụwia na Ngwaọrụ m enweghị ike ibi enweghị
Friday, December 25, 2009 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Bọọlụ Lorraine
Reading Ozi Doug eme ka m chee echiche maka ngwa niile nke m dabere dabere dịka akụkụ nke otu m si azụ ahịa m na ndụ m. Ọtụtụ, Tungle na Dropbox, Doug ekwuola. Mana nke a bụ ndepụta nke ndị ọzọ ole na ole m enweghị ike iche n'echiche ndụ na-enweghị:
WebNotes - Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa nke nyocha weebụ m. Ma m na-anwa ịchọta ozi maka ọrụ ndị ahịa, mmụọ nsọ maka post blọgụ, ma ọ bụ soro nsonaazụ nke mkpọsa PR, WebNotes na-enye m ohere ijide ma hazie ozi site na ndetu ya na ihe ngosi. Akụkụ kachasị mma bụ ngwa ọrụ akụkọ. Mgbe ejiri Alert Google akpaghị aka, anyị dị ka anyị were ọtụtụ awa na-achọ weebụ ma na-akwadebe akụkọ nchịkọta!
Adreesị - Karịa adreesị akwụkwọ, nke a bụ ezigbo ngwaọrụ CRM. Ejirila m ọtụtụ ntọala data rụọ ọrụ na afọ ole na ole iji jikwaa kọntaktị m, Nweta (M wuru nke m, nwata nwoke ahụ bụ geeky), ACT na Outlook na achọpụtara m na nke a dabara m nke ọma. Dabere na ntanetị, enwere m ike ịkekọrịta kọntaktị m na otu m dum. Anyị nwere ike ijikwa kọntaktị na ọrụ na-ewu na ndepụta ọrụ. Ọzọkwa, m ji nwayọ na-esi na ConstantContact na -aga na ngwa email Email AddressTwo. Ọ bụ ezie na ọ pere mpe site na nhazi na ịkọ akụkọ, enwere m mmasị n'ịjụ ajụjụ maka isi data ahụ, mata otu ndị ziri ezi, ma nyefee ozi kwesịrị ekwesị.
Ahụrụ m ike izipụ Addy na aha ndị m chọrọ itinye na ntọala data m ma ọ bụ webata ibe ya ma ọ na-elekọta ya. (Ee amaara m na ọ bụghị mmadụ n'ezie, mana oge ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ karịa m karịa ezigbo onye ọrụ, yabụ na o siri ike ịghara iche banyere ya dị ka mmadụ)
Ọdịdị - Ndị maara m nke ọma na-ahụ ya n'ụzọ na-atọ ọchị nke ukwuu na m na-akpata ndụ m dị ka onye edemede, n'ihi na abụghị m onye edemede. Abụ m onye okwu! Dị ka onye na-ekwu okwu, enwere m mmasị na echiche nke ịgbakwunye pọdkastị na m blog na Audacity emeela ka nke ahụ kwe omume. Na na obere oge nyekwara, m kpaliri si novice edezi pro. Enweghị m ike idezi ọbụlagodi ntakịrị um, er ma ọ bụ nkwụsị ekwentị. (Agbanyeghị mgbe ụfọdụ ana m ahapụ ha, naanị maka na ha tinye agwa).
Enwere m mmasị na pọdkastị kwa izu na-ebelata ọnụ ọgụgụ ederede m ga-eme, mana enwerekwa uru ndị ọzọ. Mmemme na-enye m ihe ngọpụ ịkpọ òkù enyi na maka oge ndekọ na nleta. Ugbu a m mụtara jikwaa na teknụzụ, ndekọ na-ewe naanị nkeji ole na ole, mgbe ahụ anyị nwere oge ijide ma kwuo maka ihe ndị ọzọ!
Ngwa atọ ndị a dịịrị m ọhụụ na 2009. Ọ bụ ihe ịtụnanya etu teknụzụ ọhụụ si bụrụ akụkụ nke ndụ gị. Enweghị m ike ichere ịhụ ihe m ga - achọpụta n'afọ ọzọ!
Tags: tụlee abụọnkwenyeokirikiringwaọrụihe ntanetị
Akụrụngwa na Ngwa na-edebe m n’ahịa
Idopu Super Bowl maka Digital Media
Dee 25, 2009 na 11: 44 AM
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ myirịta dị n’etiti anyị, Lorraine! Agbabeghị m AddressTwo abụọ - mana CRM nwere ike ịdị n'ọdịnihu m.
Dec 25, 2009 na 12:43 PM
Gịnị ka ha na-ekwu banyere ndị nwere nnukwu uche?